Salamo 8: Tompon'ny fanantenana tsy miangatra - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
haino aman-jery > Journal succession > 2014-03 mpandimby ny Magazine > Salamo 8: Tompon'ny Hopeless
Nenjehin'ny fahavalo ary feno fahatokiana, dia nahita herim-po vaovao i David tamin'ny fahatsiarovana ny hoe Andriamanitra hoe: «Ilay Tompon'ny Mpamorona mahery vaika, izay mikarakara ny tsy manan-kery ary ampahorina mba hiasa amin'izy ireo tsy misy famerana. ».
« Salamo nataon'i Davida hohiraina amin'ny Gitita. Tompo ô, mpanapaka anay ô, endrey ny voninahitry ny anaranao amin’ny tany rehetra, Izay anehoanao ny fiandriananao any an-danitra! Avy amin'ny vavan'ny ankizy madinika sy ny zaza minono no nanamboaranao hery ho an'ny fahavalonao, mba handringananao ny fahavalo sy ny mpamaly. Raha mahita ny lanitra aho, dia ny asan'ny rantsan-tànanao, ny volana aman-kintana izay noforoninao: Inona moa ny olona iheveranao azy, ary ny zanaky ny olona no ikarakaranao azy? Efa nataonao ambany kely noho Andriamanitra izy, ary nosatrohanao voninahitra sy voninahitra. Efa nataonao ho Tompon’ny asan’ny tananao izy, ka efa nataonao ho eo ambanin’ny tongony ny zavatra rehetra, dia ny ondry aman’osy sy ny omby ary ny bibidia sy ny voro-manidina sy ny hazandrano ao amin’ny ranomasina ary izay rehetra miampita ny ranomasina. Tompo ô, mpanapaka anay, endrey ny voninahitry ny anaranao amin’ny tany rehetra!” ( Salamo 8,1-10). Andeha isika hijery an’io salamo io andalana tsirairay. Ny voninahitry ny Tompo: “Tompo ô, mpanapaka anay ô, endrey ny voninahitry ny anaranao amin’ny tany rehetra, Izay anehoanao ny fiandriananao any an-danitra”! ( Salamo 8,2)
Eo am-piandohana sy eo amin’ny faran’ity Salamo ity (and. 2 sy 10) no misy ny tenin’i Davida, izay anehoany ny maha be voninahitra ny anaran’Andriamanitra — ny famirapiratany sy ny voninahiny, izay mihoatra lavitra noho ny zavaboariny rehetra (izay ahitana ny Miisa ny fahavalon'ny mpanao Salamo!) Manatona. Ny fisafidianana ny teny hoe “Tompo ô, mpanapaka anay” dia manazava izany. Ny filazana voalohany ny hoe “Tompo” dia midika hoe YHWH na Jehovah, anarana manokan’Andriamanitra. Ny hoe “mpanapaka anay” dia midika hoe Adonai, izany hoe ilay mpanjaka na tompo. Raha atambatra, ny vokatr’izany dia ny endrik’Andriamanitra manokana sy miahy izay manana fanapahana tanteraka amin’ny zavaboariny. Eny, mipetraka amin’ny seza fiandrianana (any amin’ny avo) any an-danitra izy. Io ilay Andriamanitra iresahan’i Davida sy iangavy azy, rehefa manolotra ny didiny sy manambara ny fanantenany, toy ny ao amin’ny sisa amin’ny Salamo, izy.
Ny herin’ny Tompo: “Avy amin’ny vavan’ny ankizy madinika sy ny zaza minono no namoronanao hery ho an’ny fahavalonao, handringananao ny fahavalo sy ny mpamaly” (Salamo. 8,3).
Manontany tena i Davida fa ny Tompo Andriamanitra dia mampiasa ny “kely” hery ananan’ny ankizy (ny tanjaka dia maneho tsara kokoa ny teny hebreo nadika amin’ny hery ao amin’ny Testamenta Vaovao) mba hamongorana na hamongorana ny fahavalo sy ireo tia valifaty mba hiomanana. Ny tanjona dia ny hametrahana ny heriny tsy manam-paharoa amin’ny alalan’ny fampiasana ireo zaza sy zazakely tsy manan-kialofana ireo. Kanefa, tokony horaisintsika ara-bakiteny ve ireo fanambarana ireo? Tena mampanginin'ny ankizy ve ny fahavalon'Andriamanitra? Angamba, saingy azo inoana kokoa, fa i Davida sy ny ankizy dia mitarika an'ohatra ireo zavaboary madinika sy malemy ary tsy manan-kery. Eo anatrehan’ny hery mihoa-pampana (mihoatra) dia tsy isalasalana fa tonga saina amin’ny tsy fahaizany izy, ka dia fampiononana ny mahafantatra fa ny Tompo, ilay Mpamorona sy Mpitondra mahery, dia mampiasa ny tsy manan-kery sy ny ampahorina amin’ny asany.
Ny zavaboarin’ny Tompo : « Raha hitako ny lanitra, asan’ny rantsan-tànanao, ny volana aman-kintana izay noforoninao, inona moa ny olona, ​​no hahatsiarovanao azy, ary ny zanaky ny olona, ​​no ikarakaranao azy? ?" ( Salamo 8,4- iray).
Ny eritreritr’i Davida izao dia mitodika any amin’ny fahamarinana manafintohina fa nomen’i Jehovah Andriamanitra Tsitoha tamin-katsaram-panahy ny ampahany amin’ny fanjakany ho an’ny olombelona. Noresahiny aloha ny asa famoronana lehibe (anisan’izany ny lanitra ... volana sy ... kintana) ho asan’ny rantsantanan’Andriamanitra, ary avy eo dia naneho ny fahagagany fa nomena ny olona voafetra (ny teny hebreo dia enosa ary midika hoe olona mety maty sy malemy). andraikitra be. Ireo fanontaniana ara-pitenenana ao amin’ny andininy faha-5 dia manantitrantitra fa zavaboary tsy misy dikany eo amin’izao rehetra izao ny olona ( Salamo 14 ).4,4). Kanefa Andriamanitra dia mikarakara azy fatratra. Efa nataonao ambany kely noho Andriamanitra izy, ary nosatrohanao voninahitra sy voninahitra izy.
Aseho ho asa mahery sy mendrika ny namoronan’Andriamanitra ny olombelona; fa natao ambany kely noho Andriamanitra ny olona. Ny Elohim hebreo dia nomena ao amin'ny Baiboly Elberfeld ho "anjely", fa angamba amin'izao fotoana izao dia tokony homena safidy ny fandikana misy "Andriamanitra". Ny tiana holazaina eto dia ny hoe noforonina ho governoran’Andriamanitra teto an-tany ny olombelona; napetraka ho ambony noho ny zavaboary rehetra, fa ambany noho Andriamanitra. Talanjona i Davida fa nomen’ny Tsitoha voninahitra toy izany ny olona voafetra. Amin’ny Hebreo 2,6-8 io salamo io dia notononina mba hampifanohitra ny tsy fahombiazan'ny olona amin'ny fiafarany ambony. Saingy tsy very ny zava-drehetra: i Jesoa Kristy, Zanak'olona, ​​no Adama farany (1. Korintiana 15,45; 47), ary eo ambaniny ny zavatra rehetra. Toe-tany izay ho tanteraka tanteraka rehefa miverina ara-batana eto an-tany izy mba hanokatra ny lalana ho amin’ny lanitra vaovao sy tany vaovao ka hamita ny drafitr’Andriamanitra Ray sy ny olombelona ary ny zavaboary rehetra mba hanandratana (fanomezam-boninahitra) .
Nanao azy ho tompon'ny tànanao ianao, efa nanao ny zavatra rehetra teo ambanin'ny tongony: ondry sy omby mandritra ny andro, ary ny bibidia koa, ny vorona ambanin'ny lanitra sy ny trondro any an-dranomasina ary izay rehetra mandeha amin'ny ranomasina.
Amin'izay fotoana izay i Davida dia lasa eo amin'ny toeran'ny olona ho governoran'Andriamanitra (mpitantana) eo amin'ny zavatra noforoniny. Taorian’ny namoronan’ny Tsitoha an’i Adama sy i Eva, dia nandidy azy ireo hanjaka amin’ny tany Izy (1. Mosesy 1,28). Tokony hanaiky azy ireo ny zavamananaina rehetra. Noho ny fahotana anefa, dia tsy tanteraka tanteraka io fanapahana io. Mampalahelo fa ny esoeson'ny lahatra dia mety ho ny zavaboary ambany indrindra, dia ny bibilava, no nahatonga azy ireo hikomy tamin'ny didin'Andriamanitra sy handa ny anjara nokasainy ho azy. Ny voninahitry ny Tompo: "Tompo Tomponay, endrey ny voninahitry ny anaranao amin'ny tany rehetra!" ( Salamo 8,10).
Nifarana ny salamo raha vao nanomboka - ho fiderana ny anaran'Andriamanitra be voninahitra. Eny, ary marina tokoa ny fisehoan'ny voninahitry ny Tompo amin'ny fiahiany sy ny fiantrany, izay itodihany ny olona amin'ny fahamendrehany sy ny fahalemeny.
Araka ny fantatsika, ny fahafantaran’i Davida ny fitiavan’Andriamanitra sy ny fiahian’Andriamanitra ny olombelona dia hita ao amin’ny Testamenta Vaovao amin’ny maha-olona sy ny asan’i Jesosy. Ao no ianarantsika fa Jesosy no Tompo izay efa manapaka (Efes 1,22; Hebreo 2,5-9). Fitondrana izay hiroborobo amin’ny tontolo ho avy (1. Korintiana 15,27). Tena mampionona sy mahafaly tokoa ny mahafantatra fa na dia eo aza ny fahasahiranana sy ny tsy fahafaham-pontsika (kely raha oharina amin’ny haben’izao rehetra izao tsy hay refesina) dia eken’ny Tompontsika sy ny Tompontsika mba handray anjara amin’ny voninahiny, dia ny fitondrany ny zavaboary rehetra.